Nahazo Fanohanana Tamin’ny Aterineto Ny Lehiben’ny Minisitra Ao Myanmar Noho Ny Fihantsiana Nataony Tamin’ny Vondrona Radikaly Bodista · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jolay 2016 5:00 GMT
Nanao fanambarana sahisahy i Phyo Min Thei, lehiben'ny Minisitra ao an-tanànan'i Yangon ao Myanmar tamin'ny herinandro lasa raha nanambara izy fa “tsy ilaina intsony” ny vondrona radikaly nasionalista Bodista Ma-Ba-Tha (Fikambanana Fiarovana ny Foko sy ny Fivavahana) satria efa misy ny Vaomieram-panjakana Sangha Maha Nayaka manara-maso ny raharaha Bodista ao amin'ny firenena.
Nandrahona hanatontosa fihetsiketsehana manerana ny firenena i Wirathu, mpitarika ambony ao amin'ny Ma-Ba-Tha raha toa ka tsy mandray fepetra ho an'i Phyo Min Thein ny governemanta.
Nahazo laza ny Ma-Ba-Tha noho ny fanambarana sy ny hetsika ataony manohitra ny Silamo. Indrindra indrindra, hery goavana ambadiky ny fanafihana ny olona Rohingya, vondrona ara-poko ​​Silamo monina ao amin'ny faritra andrefan'i Myanmar izy. Mamokatra tantara kabarim-pankahalana ireo mpanohana ny foto-kevitry ny Ma-Ba-Tha sy ireo mpitarika-ny izay mitaky amin'ny governemanta mba handroaka ny Rohingya, izay ampangain'izy ireo ho mpifindra monina tsy ara-dalàna sy mpampihorohoro. Vondrona mpiaro ny zon'olombelona maro no mihevitra ny Rohingya ho iray amin'ireo vitsy an'isa tratran'ny famoretana indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Anisan'ny ao amin'ny antoko vaovaon'ny fitondrana Ligim-pirenena ho an'ny Demokrasia (NLD), tahirin'ilay Nahazo Loka Nobel Aung San Suu Kyi i Phyo Min Thein, fantatry ny mpanohana azy amin'ny hoe Kwee Phyo. Tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny Febroary 2016 ny NLD rehefa nandresy ny antoko tohanan'ny miaramila nandritra ny fifidianana ankapobeny. Nitondra an'i Myanmar nanomboka tamin'ny taona 1962 hatramin'ny fiandohan'ity taona ity ny miaramila.
Nahazo laza tamin'ny fametrahana fanavaozana maromaro mampiadi-hevitra ny lehiben'ny minisitra ao Yangon, Phyo Min Thein, tahaka ny fitsipika momba ny fanorenana napetrany tamin'ny volana Aprily nandritra ny fetiben'ny rano fanao isan-taona. Saingy mbola nampiteraka adihevitra goavana iray aza izy tamin'ny herinandro lasa raha nanao fanambarana ampahibemaso mamely ilay mahery vaika Ma-Ba-Tha.
Indreto fanehoan-kevitra sasany tamin'ny tenirohy #‎NOMaBaTha‬. Navahan'i Htin Linn Aye tamin'ny moanina Bodista ambiny ao amin'ny firenena ny Ma-Ba-Tha:
Moe Kaung San kosa mihevitra fa mandoto ny endriky ny Bodisma ny fihetsiky ny Ma-Ba-Tha: